EyeDwarha 24, 2018 admin
NASDAQ iphumelele patent kwinkonzo iindaba esekelwe blockchain
NASDAQ uzuze lomenzi echaza indlela blockchain zingasetyenziswa ukukhulula iinkcukacha njengenxalenye yenkonzo wire. I-US patent ichaza indlela blockchain zingasetyenziswa ukukhulula ngokunqabisekileyo ulwazi time-onovakalelo xa kuyimfuneko. patent NASDAQ ichaza iqonga blockchain ukuba ukusebenzisa izivumelwano smart ukuze kudityaniswe iqela encryption komsebenzi neempawu, ngexesha ilondoloza oluzaku kuba nzima ngakumbi ukutshintsha ngokuhamba kwexesha.
Le patent ithi “Ukufikelela kulwazi enovakalelo igcinwa kwi blockchain singabandakanya imfuneko multi-utyikityo oyinxalenye zeempendulo olungisiweyo eynza kwathengwa blockchain zinikwe. Abamkeli bekujongwe ukuba inkcazelo ngoko interface ngqo blockchain ngexesha ebimiselwe, ukuze bafumane ulwazi kuye agcinwe ngokukhuselekileyo,”
Japans SBI ukuze uqalise akhawunti entsha crypto
Iinkonzo zemali Japanese ngxilimbela SBI Group uzimanye kunye siqalo yokhuseleko blockchain ukuphuhlisa isipaji digital utshintsho yayo crypto kutshanje usungule. SBI yaqalisa VCTRADE ngoJuni ukuba yokuqala yaseJapan bank-exhaswa, exchange cryptocurrency onelayisensi ngurhulumente.
Yoshitaka Kitao, umlawuli omele, umongameli and CEO of SBI Holdings, wathi “Emva kophando olunzulu, iqela lethu uphando yokubambisa emiselwe utyikityo threshold esekelwe ebalayo elakhiwe (iMPC) wanikela level yethu olufunwayo yokhuseleko, ukusebenza, kunye scalability kwakufuneka ukulawula imicimbi ukuze sikhule SBI zezimali Virtual umthengi kwisiseko.” Ethi “uninzi lwabantu” hacks ye crypto ukususela 2014 phantsi ukuze ukhuseleko abahluphekayo iqhosha, Sepior babethi ubuchwepheshe yayo isipaji “akubikho mfuneko nasiphi na isixhobo okanye iqumrhu ulime yonke iqhosha labucala nangaliphi na ixesha, nokwenza kube ngempumelelo nzima ukuba uhlaselo phelela ubusela engundoqo.”
Forbes uqala yokulandelela website ze crypto
Forbes CryptoMarkets features amaxabiso kunye nomthamo iinkcukacha-time lokwenyani cryptocurrencies kunye indices crypto. Forbes CryptoMarkets iqela oosonzululwazi data kunye badwelisi benkqubo ukuba sesimeni uluhlu olubanzi lwemithombo data oluninzi, kuquka ukutshintshiselana cryptocurrency kunye imithombo yedatha blockchain, ukuze kucaciswe kwaye ninikele olubanzi, -Time real Ngenxa cryptocurrency kunye ecosystem blockchain.
uJim Preissler, CEO of trade.io kunye UMlawuli we Forbes CryptoMarkets bathi "Forbes yeyona-zihlonelwe eendaba zoshishino uphawu ehlabathini, kunye nobudlelwane bethu ivumela ukuba zazise umgangatho ofanayo ophezulu isemgangathweni kweli candelo cryptocurrency.”
Coinbase evunyiweyo inkonzo lokukhulisa crypto eNew York
Coinbase ifumane imvume nabalawuli New York ukwenza esiqinileyo onelungelo ngokufaneleyo cryptocurrencies. The New York ISebe leeNkonzo zeZimali wanika isicelo Coinbases ukwenza i Coinbase Custody Trust Company LLC, kwakunye imvume Coinbase Trust ukunika iinkonzo egadiwe bitcoin, litecoin nabanye.
COO Coinbase kunye nomongameli Asiff Hirji uncome ukuthutha, ngokuqaphela ukuba NYDFS iye “ummeli enamandla” ukwenzela i “ukukhula onoxanduva boshishino cryptocurrency le.”
Ingxelo Daily Market Kraken for 23.10.2018
$57.5M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Post Previous:Crypto News 23.10.2018
Post Next:Crypto News 26.10.2018